Tarisiro Yekusanganisa Blockchain Technology Uye Internet Yezvinhu
NeChishanu, Kurume 15, 2019 NeChishanu, Kurume 15, 2019 Kenneth Evans
Iyo tekinoroji iri kumashure bitcoin inobvumira kutengeswa kuti kuitwe zvakavimbika uye zvakachengeteka, pasina chikonzero chemurevereri. Aya matekinoroji abva mukuregeredzwa kusvika pakuva tarisiro yehunyanzvi hwemabhangi makuru. Nyanzvi dzinofungidzira kuti kushandiswa kwe blockchain matekinoroji zvinogona kureva kuchengetedza kwemamirioni zviuru makumi maviri zvemadhora kune chikamu na20,000. Uye vamwe vanoenderera mberi uye vanotsunga kuenzanisa ichi chigadzirwa neicho cheinjini yemoto kana injini yemoto.
Chii chingagone kushandiswa kweakajairika maviri anopisa maitiro mune tekinoroji nyika kupa chii kuvanhu? Tiri kutaura nezve blockchain uye iyo Indaneti yezvinhu (IoT). Matekinoroji ese ari maviri ane mikana mikuru uye musanganiswa wavo unovimbisa zvakanyanya.
IoT iri kuchinja sei?
Pakutanga kuona, iwo matekinoroji maviri ane zvishoma zvakafanana. Asi mundima yehunyanzvi hwepamusoro, hapana chinogoneka. Kune vanhu vakati wandei vane mbiri, vane hungwaru muminda inokura nekukurumidza avo vanoda kushanda nguva yakawandisa uye kutenderera nguva kuitira kuti vawane mhinduro dzinonakidza pamharadzano yezvinhu zviviri zvitsva.
Chinhu chekutanga chinouya mundangariro chengetedzo. Nyanzvi zhinji uye makambani anotenda blockchain inogona kuvimbisa iyo IoT zvishandiso chengetedzo nekujoinha navo munzvimbo yakasarudzika, inotyisa.
IBM nguva pfupi yadarika yakatanga kufarira kushandisa blockchain yeInternet yezvinhu. Kubatanidza matekinoroji kunokutendera iwe kuti uteedzere nekuvimbika uye nekunyora nhoroondo yeshanduko yemunhu wega network uye nemapoka avo, achigadzira nzira dzekuongorora uye achikubvumidza iwe kutsanangura maitiro ezvibvumirano zvakangwara.
Iyo blockchain tekinoroji inogona kupa zvivakwa zvakapusa zvemidziyo miviri kuendesa zvakananga chikamu cheiyo chivakwa, senge mari kana dhata, kuburikidza nechengetedzo uye yakavimbika kutengeserana kusiyanisa ine tampu yenguva.
IBM yakaitisa tsvagiridzo umo vatengi uye nyanzvi vakabvunzwa kuti vaongorore zvakanakira blockchain seyakazvimiririra, yakazvimiririra, uye yeruzhinji tekinoroji. Iyo inogona kuve yakakosha chinhu chekutsigira mhinduro kunoenderana neIoT.
Mumwe wevatori vechikamu veongororo, MIT Dhijitari Wemari Initiative chipangamazano, Agentic Boka mudiwa Michael Casey akadana blockchain "muchina wezvokwadi". Nyanzvi yezvehupfumi paMIT naPurofesa Christian Catalini vakataura zvakanyanya kudzora, vachiti blockchain inobvumira iyo ecosystem yeInternet yezvinhu kudzora makomisheni ekuongorora mashandisiro uye kushandisa network.
Izvi zvinoshanda kune ese marudzi ekutengeserana, kusanganisira iwo ane hukama neIoT. Zvakare, iro danho rekutonga pamusoro pechinhu chimwe nechimwe cheIoT chinogona kusununguka. Iko kusanganiswa kweIoT uye blockchain kunogona kudzora njodzi dzekurwiswa nevanoba.
Dell mushandi Jason Compton anotora blockchain se "inokatyamadza imwe nzira" IoT yakajairika chengetedzo sisitimu. Anopa zano kuti kugadzirisa nyaya dzekuchengetedza mumatare eIoT richava dambudziko rakasimba kupfuura, semuenzaniso, Bitcoin network. Iko kusanganiswa kwe blockchain tekinoroji uye IoT ine mikana yakakura iyo iwe yaungade kutora mukana mubhizinesi rako.
Blockchain haisi yezve chengetedzo chete
Kunzwisisa blockchain uye nei ichionekwa seyakakosha kwakakosha. Icho chiri chemberi tekinoroji ye bitcoin, iyo yemafashoni cryptocurrency. Iyo bitcoin, pachayo, inonakidza asi haisi huru inosemesa kune bhizinesi modhi yesangano rezvemari. Izvozvowo hazvisi zvechokwadi nezve tekinoroji iri kumashure kwekutengesa kwe bitcoin.
Iko kushandiswa kweakagoverwa marejista matekinoroji eIoT matera anotendera kwete chete kugadzirisa nyaya dzekuchengetedza asiwo kuwedzera mabasa matsva uye kudzikisa mutengo wekushanda kwavo. Blockchain tekinoroji inoshanda nekutengeserana uye inopa kudyidzana mu network. Izvo zvakanaka pakuongorora maitiro muIoT.
Semuenzaniso, pahwaro hwe blockchain, zvinokwanisika kutsigira kuzivikanwa kwemidziyo uye kuita kubatana pakati pavo nekukurumidza. Iko kusanganiswa kwe blockchain tekinoroji uye IoT ine mikana yakakura iyo iwe yaungade kutora mukana mubhizinesi rako.
Nzira dzekushandisa blockchain paInternet yezvinhu
Muchokwadi, vatengesi vagara vachishanda kuti vavake kubatana pakati pezvigadzirwa pane blockchain-based IoT network. Kune mana madhairekitori anovanakidza kupfuura mamwe:
• Kugadzira nharaunda inovimbwa.
• Kuderedza mari.
• Kurumidza kumhanyisa data.
• Kuwedzera kuchengetedzwa.
Iyo blockchain tekinoroji inogona kupa nyore zvivakwa zvemidziyo miviri kuitira kuti iwe ugone kuendesa zvakananga chikamu cheiyo chivakwa (ruzivo, mari) zvakachengeteka uye zvakachengeteka.
Mienzaniso yekushandisa blockchain muIoT network
Korean maindasitiri hofori Hyundai inotsigira blockchain-based IoT kutanga inonzi HDAC (Hyundai Dhijitari Asset Mari). Mukati mekambani, tekinoroji inochinjika yakanangana neIoT.
Inovandudza kambani Filament yakazivisa kuvandudzwa kwechip yezvigadzirwa zveIoT zvemabhizimusi.
Uku kuchengetedza data rakakosha iro rinogona kugovaniswa chete pakati pemidziyo pane blockchain tekinoroji.
Ehezve, zviitiko zvakawanda zviri padanho rekutanga. Nyaya dzinoverengeka dzekuchengetedza dzinoramba dzisina kugadziriswa. Kunyanya, zvinodikanwa kuti ushandise hwaro hwepamutemo hwekuvandudza kwakadai. Asi kana iwe ukafunga nezvekumhanyisa uko misika yese iri kuvandudzika, ndeapi mukana wekubatana kwavo kuripo, tinogona kutarisira kuti IoT, yakavakirwa pahwaro hwe blockchain, inyaya yenguva pfupi iri kutevera. Iko kusanganiswa kwe blockchain tekinoroji uye IoT ine mikana yakakura iyo iwe yaungade kutora mukana mubhizinesi rako. Iwe unofanirwa kusangana ne app ekuvandudza makambani kuhaya blockchain vagadziri. Iwe unofanirwa kusanganisa aya matekinoroji mubhizinesi rako nhasi.
Tags: Indaneti zvinhuTechnology
Kenneth Evans Friday, March 15, 2019 Friday, March 15, 2019
Kenneth Evans ndeyeMukati Yekushambadzira Strategist ye Wepamusoro App Kuvandudza Makambani, yekutsvagisa chikuva chemakambani ekuvandudza mapurogiramu muUSA, UK, India, UAE, Australia uye kutenderera pasirese. Anga achipa kune akasiyana mablogging mapuratifomu uye Foramu.
Zvivakwa zveSalon zvebhizinesi: 10 Inogoneka Kushambadzira Pfungwa Dzinogona Kukubatsira Kuchengetedza Mamwe Vatengi
SpotOn uye Poynt: POS Yakabatanidzwa Kushambadzira Kwebhizinesi Diki